40 Nke a bu okwu Jehova nke ruru Jeremaya ntị mgbe Nebuzaradan+ bụ́ onyeisi ndị nche hapụrụ ya na Rema+ ka ọ lawa, n’oge ọ kpọọrọ ya mgbe a tụrụ ya ịgà n’etiti ndị niile e si na Jeruselem na Juda dọrọ n’agha, bụ́ ndị a chị na-ala Babịlọn.+
2 Onyeisi ndị nche wee kpọrọ Jeremaya, sị ya: “Ọ bụ Jehova Chineke gị kwuru na ọdachi a ga-adakwasị ebe a,+
3 Jehova emewo ka o mezuo, o mewokwa nnọọ dị ka o kwuru, n’ihi na unu mehiere Jehova, unu erubeghịkwa isi n’ihe o kwuru. Ọ bụ ya mere ihe a ji mee unu.+
4 Lee, taa, atọpụwo m gị ịgà a tụrụ gị n’aka. Ọ bụrụ na ọ dị gị mma iso m laa Babịlọn, bịa, anya m ga-adịkwa n’ebe ị nọ.+ Ma ọ bụrụ na ọ dịghị gị mma iso m laa Babịlọn, hapụwa. Lee! Ala a dum dị n’ihu gị. Ebe ọ bụla masịrị gị nke dịkwa gị mma ịga, gawa.”+
5 O kpebibeghị ma ọ̀ ga-alaghachi, mgbe Nebuzaradan sịrị: “Laghachikwuru Gedalaya+ nwa Ahaịkam+ nwa Shefan,+ onye eze Babịlọn mere onyeisi nke obodo ndị dị na Juda, gị na ya biri n’etiti ndị gị; ma ọ bụkwanụ, gị agawa ebe ọ bụla dị gị mma ịga.”+
Onyeisi ndị nche wee nye ya nri ọ ga na-eri, nyekwa ya onyinye wee hapụ ya ka ọ gawa.+
6 Jeremaya wee bịakwute Gedalaya+ nwa Ahaịkam na Mizpa,+ ya na ya wee biri n’etiti ndị ya bụ́ ndị fọdụrụ n’ala ahụ.
7 Ka oge na-aga, ndị ọchịagha niile nọ n’ala ahụ+ na ndị agha ha nụrụ na eze Babịlọn emewo Gedalaya nwa Ahaịkam onyeisi ala ahụ nakwa na o mewo ya onyeisi ndị ikom na ndị inyom na ụmụntakịrị na ụfọdụ n’ime ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha nọ n’ala ahụ, bụ́ ndị a na-adọrọghị n’agha laa Babịlọn.+
8 Ha wee bịakwute Gedalaya n’obodo Mizpa. Ndị bịakwutere ya bụ Ishmel+ nwa Netanaya na Johenan+ na Jọnatan, bụ́ ụmụ Kariya, na Seraya nwa Tanhumet na ụmụ Ifaị onye Netofa+ na Jezanaya+ nwa onye Meakat,+ ha na ndị agha ha.+
9 Gedalaya+ nwa Ahaịkam+ nwa Shefan+ wee ṅụọrọ ha na ndị agha ha iyi,+ sị: “Unu atụla egwu ijere ndị Kaldia ozi. Birinụ n’ala a jewere eze Babịlọn ozi, ihe ga-agazikwara unu.+
10 Lee, mụ onwe m ga-ebi na Mizpa+ ka m wee nọchite anya unu n’ihu ndị Kaldia ga-abịakwute anyị. Unu onwe unu, na-ebukọtanụ mmanya+ na mmanụ, na-aghọkwanụ mkpụrụ osisi na-amị n’oge okpomọkụ ma na-awụnye ha n’arịa unu, birikwanụ n’obodo ndị unu weghaara.”
11 Ndị Juu niile nọ na Moab na ndị nọ n’etiti ụmụ Amọn na ndị nọ n’Idọm na ndị nọ n’ala niile ọzọ+ nụkwara na eze Babịlọn hapụrụ ụfọdụ ndị na Juda nakwa na o mere Gedalaya+ nwa Ahaịkam nwa Shefan onyeisi ha.
12 Ndị Juu niile wee si n’ebe niile a chụsasịrị ha na-alọta, ha wee na-abata n’ala Juda, na-abịakwute Gedalaya n’obodo Mizpa.+ Ha wee na-ebukọta mmanya ha, na-aghọkwa mkpụrụ osisi na-amị n’oge okpomọkụ n’ebe ọ dị ukwuu.
13 Ma Johenan+ nwa Kariya+ na ndị ọchịagha niile nọ n’ala ahụ+ bịakwutere Gedalaya n’obodo Mizpa.
14 Ha wee sị ya: “Ị̀ maara na Bealis, bụ́ eze ụmụ Amọn,+ ezitewo Ishmel+ nwa Netanaya+ ka o gbuo gị?” Ma Gedalaya nwa Ahaịkam ekwetaghị ihe ha kwuru.+
15 Johenan+ nwa Kariya wee nọrọ n’ebe zoro ezo na Mizpa gwa Gedalaya, sị: “Achọrọ m ịga gbuo Ishmel nwa Netanaya, n’ihi na ọ dịghị onye ọ bụla ga-amata.+ Gịnị mere ọ ga-eji bịa gbuo gị, gịnịkwa mere ndị Juda niile bụ́ ndị na-alọghachikwute gị ga-eji gbasasịa, ndị Juda fọdụrụ ewee laa n’iyi?”+
16 Ma Gedalaya+ nwa Ahaịkam+ sịrị Johenan nwa Kariya: “Emela ihe a, n’ihi na ọ bụ ụgha ka ị na-agha banyere Ishmel.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D24%26Chapter%3D40%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl